Xiriirrada Apple ee Kuuriyada Koonfureed ee loogu talagalay Baabuurka Apple | Waxaan ka imid mac
Waxay u ekaan kartaa meel fog, laakiin Baabuurka Apple wali wuxuu ku jiraa wararka si joogto ah. Xaaladdan oo kale, shirkadda Cupertino iyo sida qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah, waxay kulamo la yeelan lahayd qaar ka mid ah kuwa soo saara baabuurta korontada ee ugu waaweyn dalka.
Dhowr shirkadood oo baabuur oo ka tirsan shirkadda Cupertino lafteeda ayaa la kulmay wax soo saarayaasha kale ee Kuuriyada Koonfureed si ay u soo saaraan wax u muuqda baabuurka korontada ee Apple. Way iska caddahay in shirkadu dhowr dhinac ka furan tahay arrintan iyo software -ku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah mashruuca laakiin sidoo kale baabuurka laftiisa.
Iskaashi la leh shirkad baabuur
Waagii hore waxaan horay u aragnay xoogaa burush ah oo ku saabsan ururkan suurtogalka ah ee Apple ee Nissan, General Motors ama Hyundai-Kia, laakiin dhab ahaantii midkoodna midho ma dhalin. Mashruuca samaynta baabuur koronto oo u gaar ah ayaa qaboojiyay bilooyinkii, ugu yaraan dibedda, markaa ugu dambayn muddo dheer kamaynaan hadlin.
Hadda mar kale suurtagalnimada ayaa u muuqata in Apple ay samaysato baabuur koronto leh iyada oo gacan ka helaysa shirkad baabuur. Dareenkan, maahan inaan haysanno wax rasmi ahaan loo xaqiijiyay, aad uga yar, laakiin waa run inaan sanado ka hadlaynay mashruuca ama mashruuca suurtagalka ah, marka wax ayaa ugu dambayn imaan kara imaanshaha. Horumarinta waa in diiradda la saaraa baytariyada baabuurka korontada iyo Apple -kan wax badan ayaa ku leh, waan arki doonaa haddii ay ugu dambayn dhacdo ama aysan dhicin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Xiriirrada Apple ee Kuuriyada Koonfureed ee loogu talagalay Baabuurka Apple